Boky vaovao: Fitsarana aorian'ny ady - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Boky vaovao: Fitsarana aorian'ny ady
Aogositra 3, 2021 Fampitaham-baovao 0
"Ity boky ity dia loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fananganana ny fahalalana ny fandriam-pahalemana sy ny fanombohana ny hetsika fandriam-pahalemana amin'ny fikatsahana ny fahamarinana." - Betty A. Reardon
Fitsarana aorian'ny fifanoherana: Fanamelohana ny fahamarinana amin'ny tribonaly manerantany momba an'i Iràka
Nosoratan'i Janet C. Gerson sy Dale T. Snauwaert
Natontan'i Cambridge Scholar Publishing, 2021
Ity boky ity dia manolotra anjara biriky lehibe amin'ny fahalalantsika ny fahamarinana aorian'ny fifandonana ho singa lehibe amin'ny etika sy ny fahamarinana manerantany amin'ny alàlan'ny fikarohana nataon'ny Tribunal Iraisampirenena momba ny Irak (WTI). Ny ady tamin'ny 2003 tany Irak dia niteraka hetsi-panoherana manerantany ary namoaka adihevitra momba ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna amin'ny ady. Ho valin'izany, ny WTI dia nalamin'ny mpikatroka ady sy ady ary fandriam-pahalemana, manampahaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena, ary ny olon-tsotra izay nitaky ny zon'ny olom-pirenena eran-tany hanadihady sy hanoratra ny andraikitry ny ady ataon'ny manampahefana ofisialy, governemanta ary ny Firenena Mikambana, ary koa ny fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka manerantany. Ny endrika demokratikan'i WTI, endrika fanandramana dia fananganana fitsarana aorian'ny ady, fomba fiasa vaovao ao anatin'ny sehatry ny fanadihadiana taorian'ny ady sy ny fahamarinana. Ity boky ity dia boky mitarika teôria sy azo ampiharina ho an'izay mitady hamerina ny demaokrasia niniana natao ho fototra iorenan'ny famerenana amin'ny laoniny ny fari-pitsipika etika amin'ny filaminana milamina sy ara-drariny.
Vidio ny boky amin'ny alàlan'ny Publishing Cambridge Scholar
Janet C. Gerson, EdD, dia talen'ny fanabeazana ao amin'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana, ary niara-niasa ho toy ny Tale mpiara-mitantana ny Peace Education Center ao amin'ny University of Columbia. Nahazo ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainana 2018 tamin'ny Fahamendrehana sy ny fanalam-baraka olombelona ary ny mari-pahaizana momba ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana tamin'ny taona 2014 ho an'ny fanjarian-bahoaka momba ny fahamarinana eran-tany: ny tribonaly manerantany momba an'i irak. Nanolotra toko ho an'ny Dignity maha-olona izy: Fomba fanao, lahateny ary fanovana (2020); Fikarohana ny fomba fijerin'i Betty A. Reardon momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana (2019); The Handbook of Conflict Resolution (2000, 2006); ary mianatra mamaky ady: mampianatra mankany amin'ny kolotsaina fandriam-pahalemana (2001).
Dale T. Snauwaert, PhD, dia profesora momba ny filozofia momba ny fanabeazam-pirenena sy ny fandriam-pahalemana ary talen'ny programa momba ny mari-pahaizana momba ny diplaoma momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana sy ny mpianatra tsy ampy taona momba ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Oniversiten'i Toledo, Etazonia. Izy no Tonian-dahatsoratry ny In Factis Pax: Gazety amin'ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana ara-tsosialy ary nahazo Fulbright Specialist Grant ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana any Kolombia. Namoaka lohahevitra toa ny teolojika demokratika, teoria momba ny fahamarinana, etika ady sy fandriampahalemana, fototra iorenan'ny fandinihana fandriam-pahalemana ary ny filozofia fanabeazana ny fandriam-pahalemana. Ny boky navoakany farany dia misy: Betty A. Reardon: Mpisava lalana amin'ny fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny zon'olombelona; Betty A. Reardon: Lahatsoratra lehibe momba ny miralenta sy ny fandriam-pahalemana; ary Fanabeazana momba ny zon'olombelona mihoatra ny Universalism sy Relativism: Hermeneutika mifandraika amin'ny fahamarinana eran-tany (miaraka amin'i Fuad Al-Daraweesh), ankoatry ny hafa.
Nosoratan'i Betty A. Reardon
Mort, "Tsy misy zavatra azo ampiharina toy ny teôria voaorina tsara."
Betty, "Eny tokoa, ary tsy misy zavatra azo ampiharina amin'ny famolavolana teôria afa-tsy ny hevitra voafaritra tsara."
Notsiahiviko ny fifanakalozana etsy ambony, taona vitsivitsy lasa izay, tamin'ny faran'ny Morton Deutsch, mpisava lalana hajaina manerantany eo amin'ny sehatry ny fandalinana fifandonana, rehefa nandinika ity boky ity aho, asa iray mamaky teorika sy teôlôjika. Janet Gerson sy Dale Snauwaert dia manolotra ny sehatry ny fahalalana ny fandriam-pahalemana, ny fikarohana, ny fanabeazana ary ny hetsika, fandraisana anjara vaovao sy sarobidy amin'ny fomba fihevitsika sy ny fihetsika tokony hananantsika amin'ny fahamarinana ho fototry ny fandriam-pahalemana. Io fototra io, izay naseho mazava tao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy ireo fanambarana normative maro hafa, voahitsakitsaka sy nihorohoro tahaka izany, dia mijanona ho etika izay hanoherana ireo karazana herisetra marobe izay miteraka olana ara-pihavanana.
Fitsarana haverina: ny fitsarana ara-demokrasia ao amin'ny tribonaly manerantany momba an'i Iràka maneho singa telo tena ilaina izay mampahafantatra ny hetsika fandriam-pahalemana ankehitriny; fahamarinana, lalàna ary fiarahamonim-pirenena. Mametraka ny fandraisana andraikitry ny fiarahamonim-pirenena iraisam-pirenena ankehitriny ao anatin'ny rafitry ny teoria momba ny fahamarinana izay mifamatotra amin'ny filozofia politika maoderina. Manombana ny fomba fijery sy ny fomba fiasa manoloana ny fampiasana ny lalàna amin'ny fanatanterahana ny fandriampahalemana maharitra sy ny demokrasia. Ny tena zava-dehibe dia manome fiheverana vaovao momba ny “fahamarinana taorian'ny ady”. Ankehitriny, rehefa omena kely na tsy misy laharam-pahamehana ny fahamarinana amin'ny fanaovana politika ampahibemaso, ary heverina ho nofinofin'ny adala ny demokrasia, ity boky ity dia manolotra fanadihadiana tranga voaporofo tsara, mampiseho fa tsy zava-poana ny fikatsahana ny fahamarinana, ary ny demokrasia dia tsy nofinofy adala. . Mampiseho amintsika izany fa ny lalàna sy ny fizika ara-pitsarana, na dia misy aza ny olan'izy ireo amin'ny loharano misy fanamby, ny fandikana ary ny fanatanterahana, dia mijanona ho fitaovana ilaina amin'ny fananganana filamin'izao tontolo izao.
Ny fahamarinana, ny fototry ny demokrasia, ary ireo mpiorina roa fototra sy tsy miova, ny lalàna ary ny andraikitry ny olom-pirenena, dia eo am-pon'ny hetsika malaza marobe mikely aina hampihena ary, amin'ny farany, hanafoana ny maha-ara-dalàna ny herisetra amin'ny paikady politika. Manomboka amin'ny ohatra nasionaly toy ny hetsika zon'olom-pirenena amerikana ka hatramin'ny fanentanana iraisampirenena toa ilay nahatratra ny fanapahan-kevitry ny Security Council 1325 momba ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny vehivavy ary ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary, ny fandrosoana handresena ny tsy fahamarinana dia namporisika ny fiarahamonim-pirenena tsy voarindra. . Ny olom-pirenena avy amin'ny faritra rehetra manerantany, miara-miasa: hisorohana ny herisetra farany ataon'ny fitaovam-piadiana nokleary; hisorohana sy hamaranana ny fandravana ny fifanolanana mitam-piadiana; hitazona ny fanimbana ny biosfera voajanahary amin'ny fiovan'ny toetrandro; ary handresena ireo fanitsakitsahana isan-karazany sy tsy mitombina momba ny zon'olombelona izay mandà ny fitoviana sy ny fahamendrehan'ny zanak'olombelona an-tapitrisany maro, dia mikatsaka ny hanao ny rariny. Gerson sy Snauwaert dia manaja azy ireo amin'ny fitantarana sy fanombanana ny tolona ataon'ny fiarahamonim-pirenena iraisampirenena amin'ireo olana marobe sy ny olana mety halamin'ny World Tribunal on Iraq (WTI). Ny fomba fiasa dia naneho mazava tsara ny andraikitry ny olom-pirenena amin'ny sehatra manerantany, ireo mpandray anjara kosa dia nilaza fa olom-pirenena mavitrika fa tsy olom-banona ao anatin'ny lamina politika iraisam-pirenena. Ny tribonaly dia iray amin'ireo zava-bita miavaka marobe teo amin'ny fiarahamonim-pirenena iraisam-pirenena izay nanamarika ity taonjato fahatelo ity, izay niditra tao anatin'ny folo taona lasa, ho iray amin'ny fitomboan'ny fahefana tsy refesi-mandidy, atosiky ny fanapahana lalàna sy ny herisetra famoretana mihombo. Na izany aza, izy koa dia, iray amin'ireo fihetsiky ny olom-pirenena mbola tsy nisy toa azy nanoloana ny fametrahana indray ny demokrasia tamin'ny alàlan'ny maso ivohoan'ny fiarahamonim-pirenena.
Ny fironana iray amin'izany hetsika izany, ny rafitra manan-tantara misy ity raharaha ity dia ny fitsaram-bahoaka, fandraisana andraikitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena rehefa tsy manome fanantenana ny famahana ny fifanolanana na ny famerenana amin'ny laoniny ny fahavoazana ho an'ny olom-pirenena noho ny fanitsakitsahana ny raharaha mahazatra. ny fenitra, manomboka amin'ny famoretan'ny olona ka hatramin'ny ary, ny fanimbana ny filaminan'ny olombelona. Nanomboka tamin'ny fiantsoana ny tribonaly iraisam-pirenena Russell-Sartre tao Stockholm tamin'ny 1966, mba hampiharihary ny tsy ara-dalàna sy ny fahalotoam-pitondrantena tamin'ny Ady Vietnam, ary hiantsoana ireo tompon'andraikitra tamin'ny heloka bevava an'arivony maro natao nandritra ny fifanolanana mitam-piadiana tsy misy dikany. WTI, ny fiarahamonim-pirenena dia nikarakara hiantso ny tompon'andraikitra mba hampamoaka ny tsy rariny manitsakitsaka ny fifanarahana ifotony ifotony izay mitazona ny fanjakana ho tompon'andraikitra amin'ny fanaovana ny safidin'ny olom-pirenena. Rehefa tsy mahavita ny andraikiny ny fanjakana, manitsakitsaka ny fangejana ara-dalàna ny fahefany ary minia manakana ny safidim-bahoaka, ny olom-pirenena dia nandray andraikitra tamina - farafaharatsiny mba hametrahana ny tsy rariny amin'ny toe-javatra toy izany, ary hanambara ny maha-meloka ireo tompon'andraikitra. Amin'ny tranga sasany, ireo olom-pirenena ireo dia manohy mitady ny fanonerana ara-dalàna ao anatin'ny rafitry ny governemanta eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Ny sasany amin'ireto hetsika ireto izay nahasarika ny sain'ny mpanao politika dia nanomboka, araka ny asehon'ny mpanoratra, avy amin'ny andiam-pandrenesana imasom-bahoaka momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy, toy ny natao tao amin'ny forum ONG natao niaraka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana fahefatra 1995. momba ny Vehivavy, hatramin'ny tribonaly iraisam-pirenena momba ny fanandevozana ara-nofo natao tany Tokyo tamin'ny 2000, dia nitatitra tamin'ny fahitalavitra Japoney, ary ny zavatra hita dia napetraka tao amin'ny Vaomiera UN momba ny zon'olombelona (Komitin'ny zon'olombelona ankehitriny.) Nalamina sy notarihina namboarina tamim-pitandremana ny lalàm-panorenana, nanamafy izy fa fanitarana ny tribonaly ady tany Tokyo tany am-boalohany, natao hametrahana andraikitra amin'ny heloka be vava nataon'ny Japoney tamin'ny fitondrany ny Ady Lehibe Faharoa. Io tribonaly io dia noheverina ho iray amin'ireo tsy nahavita ny fizotran'ny fanjakana. Ny tribonaly Tokyo 2000 dia nitady ny rariny ho an'ny "vehivavy fampiononana" an'arivony, tsy noraharahaina tamin'ny fitsapana tany am-boalohany, izay voarakitry ny fanolanana tamina rafitra brothel notontosain'ny miaramila japoney nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ity tribonaly fiarahamonim-pirenena ity dia maodely iray amin'ny fahaizana juridical eo am-pelatanan'ny vondrona olom-pirenena manolo-tena. Na dia tsy misy aza amin'ireto fomba fiasa ireto manana fanjakana ofisialy na fanekena eo anelanelany, dia nanana hery ara-pitondrantena lehibe izy ireo, ary naneho ny fampiasana ny ady hevitra ara-dalàna hanazava sy hanazava ny tsy rariny noresahin'izy ireo. Ary, antony manandanja ny fivoaran'ny tena zom-pirenena manerantany, nasehon'izy ireo ny fahafahan'ny fiarahamonim-pirenena manao izany.
Ny WTI, araka ny fitantaran'i Gerson sy Snauwaert, dia azo antoka fa mariky ny tany nandritra ny taonjato maro lasa soloina ny herin'ny lalàna amin'ny herin'ny lalàna. Raha izany dia tokony ho fantatry ny rehetra izay mihevitra ny tenany ho anisan'io hetsika io, ary izay rehetra miasa amin'ny fanaovana ny sehatry ny fandriam-pahalemana ho anton-javatra lehibe iray mitondra anjara biriky amin'ny fahombiazany. Ny WTI dia tsy notarihan'ny lalàna iraisam-pirenena tanteraka, ny fihoaram-pefy sy ny fampiasa tsy ara-dalàna izay nahatonga ny mpandray anjara sasany handà ny fampiharana ny fenitra iraisam-pirenena mifandraika amin'izany. Na izany na tsy izany dia tokony homena toerana manan-danja eo amin'ny tantaran'ny fiarahamonim-pirenena izay manaiky - ary amin'ny tranga toa ny tribonaly Tokyo - dia mangataka sy mampihatra ny lalàna iraisam-pirenena. Izy io koa dia tokony hisongadina amin'ny fianarana natao hanatanterahana ny hetsika toy izany ny olom-pirenena.
Na izany aza, raha tsy misy foto-kevitra mifanaraka amin'izany, ny fianarana dia tsy azo ambolena, na ny hetsika noforonina sy novonoina. Noho izany antony izany, ny fiahiahiam-pampianaran'ny mpanabe fandriam-pahalemana miaraka amin'ny fahalalana takiana dia mihevitra ny famaritana ny fahamarinana ambara, ny fon'ity asa ity, ho fandraisana anjara lehibe amin'ny sehatra. Avy amin'ny fandinihan-dry zareo sy ny fanombatombanana an'ity raharaha ity dia nanodinkodina hevi-baovao ny mpanoratra, nanitatra ny endrik'ireo fahamarinana notadiavina ary indraindray nanjary fehezan-dalàna nasionaly sy iraisam-pirenena nandritra ny taonjato maro nivoaran'ny demokrasia. Mampiseho ny ezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena ny kaontin'izy ireo, miainga avy amina foto-kevitra politika roa tena ilaina izay tsy tafiditra amin'ny baiko iraisam-pirenena taorian'ny Ady Lehibe Faharoa; Ny politikam-bahoaka dia tokony hiorina amin'ny sitra-pon'ireo olom-pirenena, ary ny fikatsahana ny fahamarinana dia andraikitry ny fanjakana voalohany. Ireo toro lalana roa ireo dia voahitsakitsaka tamin'ny ady natombok'i Etazonia tamin'ny Irak. Raha fintinina, ny WTI dia fanandramana hitaky fiandrianam-bahoaka malaza, ny fiheverana ara-politika germinal an'ny maoderina dia nilaza fa tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX dia nanamboatra sy nibaiko ny baiko iraisam-pirenena natao "hisorohana ny famelezan'ny ady." Tamin'ny fiandohan'ny taonjato ankehitriny, ireo fanjakana ireo dia efa nanohitra izany tanjona izany ary nanitsakitsaka fatratra ny fitsipika roa tamin'ity tranga ity sy ireo tranga hafa.
WTI, hoy ny mpanoratra, dia famerenana ireo fenitra ifotony tafiditra ao amin'ny baiko iraisam-pirenena taorian'ny ady lehibe faharoa, natsangana ho an'ny Firenena Mikambana ho ivon-toerana andrim-piarahamonina eran-tany nanolo-tena ho amin'ny fanatanterahana sy ny fihazonana ny fandriam-pahalemana, ary amin'ny fanekena ny rehetra ny zo fototra sy ny fahamendrehana ho an'ny olona rehetra. Tokony hamafisina fa ireo fenitra ireo, araka ny nomarihina, dia miorim-paka ao amin'ny hevitra germinal momba sy ny tolona ho an'ny demokrasia, fa ny finiavan'ny vahoaka no tokony ho fototry ny fitantanana sy ny politikam-bahoaka. Ny tribonaly mihitsy dia nipoitra noho ny fahatezeran'ny olom-pirenena noho ny fanitsakitsahan'ny ankamaroan'ny fitsipika io, ary indrindra ny fanjakana mahery indrindra, mpikambana ao aminy ny filaminam-pirenena. Araka ny nosoratan'ny mpanoratra dia nisy fiarahamonim-pirenena eran-tany nipoitra, nanolo-tena ary nifantoka tamin'ny tsy rariny tamin'ity fitsipaham-pomba tsy mendrika sy fanao amin'ny fomba fanao mahazatra ity ary ny lalàna iraisam-pirenena natao hitazomana ny fandresena sarotra, (raha mbola te hanana ny fikasany sy ny fahefana hampihatra ny rariny izy. sy ny fandriam-pahalemana,) filaminana vaovao mipoitra. Ireo mpikarakara dia nivory teo amin'ny fanoloran-tena iraisana hiady sy hikatsaka ny rariny amin'ity raharaha ity, izay niditra tamin'ny dingana iray izay hitan'ny mpanoratra fa endrika iray vaovao amin'ny “rariny taorian'ny ady”.
Ny foto-kevitry ny fahamarinana haverina indray dia mitazona ny mety hisian'ny fampiharana midadasika kokoa mihoatra ny toe-javatra aorian'ny ady. Hifamaly aho fa azo ampiharina amin'ny hetsika hafa ho an'ny fanovana ara-tsosialy sy politika. Indrindra satria nanazava ny zava-misy azo zakain'ny zom-pirenena manerantany, izay mbola faniriana tsy voafaritra ihany satria hita ao amin'ireo literatiora fanabeazana iraisam-pirenena ankehitriny. Ao anatin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena na fitsaram-bahoaka, dia zahana ny zom-pirenena manerantany, satria ny olom-pirenena isam-pirenena, izay miasa ao anatin'ny sehatra iraisampirenena, dia afaka mandray andraikitra miaraka amin'ny tanjona iraisan'ny besinimaro. Raha fintinina, ny olom-pirenena dia manome hery ny fiarahamonim-pirenena mba hanao zavatra amin'ny fotoana ilana antoka ny tombontsoam-bahoaka, araka ny fikasana hataon'ny fanjakana ao anatin'ny rafitra Westphalian. Rehefa nivelatra tao amin'ny fanjakana maoderina io rafitra io, naniry ny demokrasia, ny safidin'ny vahoaka no nofaritana.
Nandritra ny taonjato maro, ny sain'ny vahoaka dia nohitsakitsahin'ireo izay nitana ny fahefam-panjakana, tsy nisy fihoaram-pefy noho ny fitondrana jadona intsony, nopotehina ary notanterahina ho tompon'andraikitra ara-dalàna taorian'ny fiandohan'ny Ady Lehibe Faharoa tamin'ny dingana iray izay nanome aingam-panahy ny fitsaram-bahoaka, ary naorina. ao amin'ny Principal Nuremberg, ao anatin'izany ny adidy sivika hanoherana ny hetsika tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna, ny fitsipiky ny andraikitra manokana hanoherana ny hetsiky ny fanjakana tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny. Ireo taona ireo koa dia nahita ny fametrahana andrim-panjakana sy fivoriambe natao hamerenana amin'ny laoniny ireo foto-kevitra demokratika sy fomba fanao, ary hanitatra azy ireo mihoatra ny fiaviany eoropeanina. Ity baiko iraisam-pirenena taorian'ny ady ity dia natao hanomezana toky ny fiverenan'ny hevitry ny fiandrianam-bahoaka ho fanehoana ara-politika ny hasina maha-olona ifotony tadiavin'ny olona sy ireo fikambanana naorin'izy ireo, ao anatin'izany ary indrindra ny fanjakana. Hatramin'ny nananganana ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa dia voalaza fa voalaza tao amin'ny Fanambarana Amerikanina momba ny fahaleovan-tena izany, mba hananana ireo zon'olombelona izay nambaran'ny ONU ho fototry ny fandriam-pahalemana. Ny fahamarinana, vakiana satria ny fahatsapana sy ny fiarovana ireo zony ireo dia nekena ho toy ny tanjona mitarika ny baiko politika demokratika. Saingy ny fahamarinana, araka ny voafaritra, dia hita ihany koa ary noteren'ny mpitondra fanjakana mpikambana maro izay natahotra izany ho fandrahonana ho an'ireo manana fahefana. Ny fitsarana manavotra dia mihaika ny maha-ara-dalàna ny baiko politika izay manao tsirambina ny tanjona fototra heverin'ny fanjakana ary miatrika ny vokatr'io tahotra ny fahamarinana io.
Manome fanantenana vaovao ho an'izay mitady hanafaka ny demokrasia fantatry ny tena ity fitaovana fitaovana ity raha tsy mahazo ny fiakaran'ny fahefana manerantany ankehitriny. Tsy misy hevitra politika ilaina kokoa na ilaina kokoa amin'izao fotoana izao noho ny fanitsakitsahana diso tafahoatra ny andraikitra amin'ny governemanta amin'ireo olom-pirenena. Ny fampiasana azy dia mifandraika indrindra amin'ny fironana manimba kokoa amin'ny fanimbana ny rafitra ara-pitsarana, ny fitsarana ary ny mpitsara ary ny mpanao lalàna, andrim-panjakana malaza ataon'ireo izay manana fahefana mpanatanteraka (tsy ara-dalàna). Ny fitondrana tsy refesi-mandidy any amin'ny firenena maro dia manodikodina ny andrim-panjakana sy ny andrim-panjakana miaramila hanohanana sy hanitarana ny tombontsoany manokana. Manoloana ireo tsy rariny ireo dia ilaina maika ny hevitra mifandraika ary koa ny hetsika sivika transnational toy ny hita ao amin'ny WTI. Ny hevitra momba ny fahamarinana haverina dia mamaly an'io maika io.
Ambonin'ny zava-drehetra, ity hevitra vao nofaritana ity dia fitaovana ianarana sy fitaovana fandalinana sarobidy ho an'ireo mpampihatra fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy mpanangana fahalalana momba ny fandriam-pahalemana. Ny hevi-dehibe no fitaovana fisaintsainantsika voalohany. Ny rafi-pandaminana dia ampiasaina amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana mba hamaritana ny votoatin'ny olana misy eo amin'ny endrika famotopotorana maro karazana izay mampiavaka ny fandaharam-pianarana fandriam-pahalemana. Ny fampiasana ny fandaharam-pianarana toy izany dia tsaraina amin'ny ambaratongan'ny fahombiazan'ny politikany. Ireo valiny ireo dia hamafisiko fa miankina amin'ny maha-zava-dehibe ireo lamin'ny famotopotorana momba ny fianarana. Tsy azo atao ny manamboatra rafitra na manontany ny filaharana raha tsy misy foto-kevitra mifandraika amin'izany hampivelarana azy ireo. Satria ny foto-kevitry ny fanovana ny fifandonana, dia nitondra refy vaovao amin'ny fomba izay mety hametrahana sy handaminana ny fifanolanana, hikendrena ny fanovana ifotony ny toe-piainana ifotony izay namokatra azy ireo, ny foto-kevitry ny fitsarana ambadika dia mitondra tanjona vaovao sy havaozina ho an'ny hetsika. mandresy sy manova ny tsy fahamarinana, ary amin'ny fanabeazana manomana ny olom-pirenena handray anjara amin'ireo hetsika ireo. Manolotra fototra hanamorana ny fanabeazana amin'ny fahombiazan'ny politika izy io. Izy io dia manome fiara hanamafisana sy hanazava ireo rafitra teorika momba ny fahamarinana, mba hahatonga azy ireo, ary koa ny fanabeazana hametraka teôria, hahomby kokoa amin'ny famolavolana ny politikan'ny fahamarinana. Amin'izany dia hanohy hanome hery ny olom-pirenena izy ary hiantso ny governemanta handray andraikitra. Ity lalana vaovao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny demaokrasia ity dia ilay teoria tsara izay hitan'i Morton Deutsch fa azo ampiharina ary io foto-kevitra nolazaiko io no nahafahana nanonona an'io teoria io. Ity boky ity dia loharano tena ilaina amin'ny fananganana fahalalana fahalalana ny fandriam-pahalemana sy fanombohana ny hetsika fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fikatsahana ny fahamarinana.
Miantso ny Toko Toko: Mampianatra fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny famongorana herisetra
Fahatsiarovana Hiroshima: mitomany ny fandrosoana miadana amin'ny tanjona tsy misy nokleary ny sefon'ny UN
Tontonana ICTJ-UNICEF: Fampianarana ho fitaovana lehibe ho an'ny fandriam-pahalemana
Febroary 24, 2016 Tatitra momba ny hetsika, Research 2
Tamin'ny 21 Janoary dia nanao hetsika manokana ny ICTJ sy ny UNICEF handefasana tatitra vaovao manan-danja momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fanabeazana sy ny fitsarana tetezamita. Ny fandefasana dia niaraka tamin'ny dinika an-dàlana notarihin'ny filohan'ny ICTJ David Tolbert. "Na dia miseho amin'ny fomba maro aza ny fampitana sary marina ny lasa, dia ny fanabeazana no ilaina ny singa fototra", hoy i Tolbert. “Ny fomba niresahana ny fanitsakitsahana zon'olombelona taloha iray tao anatin'ny fandaharam-pianarana dia manan-danja tokoa. Ny firesahana ny lasa dia dingana iray eo anelanelan'ny taona ary ny fanabeazana ilaina amin'izany. " [tohizo ny famakiana…]